Fiombonamben�ny Zanakandriana sy Ampanjaka Mila miala ireo tompon�andraikitry ny filaminana
Manameloka tanteraka ireo nahavanon-doza tany Beroroha ny 21 jona nahafatesana olona 31 sy teo amin�ny kianjaben�i Mahamasina ny 26 jona nandratrana olona 91 sy namoizana aina malagasy 2 ny
Mibanaka ny sisintany Tanzanianina 2 tafiditra ao Tolagnaro
Voaporofo indray omaly fa tsy voafehy mihitsy ny fanaraha-maso ny sisintany eto Madagasikara ary azo atao mihitsy aza hoe gaboraraka io fanaraha-maso io. Tranga tsy mbola fahita no niseho tao amin'ny seranan-tsambon�i Ehoala -Tolagnaro.
Rajaonarimampianina Tsy mahafehy ny firenena intsony ?
Mavesabesatra ihany tato anatin�ny roa volana izay ny raharaham-pirenena ary miha mafy isan�andro ny fanakianana ny mpitondra fanjakana. Tsy dia ilay zavatra vita na tsy vita no olana fa tena ilay endri-piainana misy amin�izao repoblika faha-4 izao mihitsy. Tsy afa-miala fa tompon�andraikitra voalohany ny filoham-pirenena.
Rajaonarimampianina Tsy mahafehy ny tafika intsony ?
Tsy nitondra fitoniana ny fitsidihan�ny sekretera jeneralin�ny Firenena Mikambana teto amintsika, ary tena diso kajy ny mpitondra fanjakana fa vao miha aza tehamaina no azony.
13 mey 2016 Atahorana ny korontana
Fotoana tokony hotsarovan�ny Malagasy rehetra ny 13 mey 1972 nisian�ny hetsi-bahoaka, notarihin�ny mpianatra nitaky fanovana, indrindra tamin�ny rafi-pampianarana tamin�izany.
Fanjakana Hvm Nokianin�i Ban Ki Moon
Ny fahavitan�ny fifidianana ara-demokratika no narangarangan�ny filoham-pirenena malagasy tamin�ny lahateniny, fa ny fanajana ny zon�olombelona kosa no nentin�Atoa Ban Ki Moon namaly azy.
Antananarivo Renivohitra Niampy 87 ireo � Percepteur de march� �
Ho fanatsarana ny fanangonam-bola